CO₂ Laser for Fashion kanye nezingubo Industry - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
CO₂ Laser for Fashion kanye nezingubo Imboni
Laser CO₂ FOR Zokugqoka
GOLDEN laser lolwakha CO₂ imishini laser ukusika Ply olulodwa, umugqa futhi plaid izindwangu, izindwangu kunyatheliswe futhi ikakhulukazi inkambiso ezenziwe oda amasudi olulodwa.
High esebenza kahle MTM (wenza i-ngesilinganiso) nge ohlakaniphile laser cutting uhlelo.
Mission: ngokuyikho / Material kulondolozwa / Labor kulondolozwa / Zero yokusungula / Intelligent
Laser Cutting futhi eqopha e nezingubo Imboni
With ukuthandwa elikhulayo nendwangu, imfashini lezigqoko umkhakha ethuthuka ngokushesha. Futhi kuba ekahle izinqubo zezimboni njenge-ukuzisika futhi oqoshiwe. Zokwenziwa kanye ngezinto zemvelo manje ngokuvamile ukusika futhi eziqoshwe laser izinhlelo . Kusukela izindwangu wathungela, anezikhala izindwangu, izindwangu nokunwebeka, izindwangu Sew ukuba Nonwovens futhi felts, cishe zonke izinhlobo izindwangu kungaba laser kusetshenzwe.
Traditional ekuhlanganiseni vs. Laser Cutting
Esikhathini evumelanisa ezivamile, ukuzisika ncwadi esetshenziswa kakhulu, kulandele ahlabayo lokukhanda. Zombili lezi zindlela ukucutshungulwa zisetshenziswa ephezulu ivolumu umsebenzi ahlabayo, futhi ukusika ukunemba akuyona okusezingeni eliphezulu. Umshini Laser ahlabayo kufanelekile encane omningi, multi-ezihlukahlukene ingubo evumelanisa, ikakhulukazi imfashini kuyashesha futhi ngokwezifiso izingubo.
Traditional ahlabayo ibhukwana lencazelo isidingo phezulu wokusika iphethini futhi burrs emva ukusika. Laser ahlabayo has a ukungaguquguquki okusezingeni eliphezulu futhi othomathikhi onqenqemeni uphawu.
Ngaphezu kwalokho, sinikeza CAD design, AUTO YOMAKA, esingaphezu kwesinqunywe okuzenzakalelayo, othomathikhi software yezithombe digitizer nge laser cutting ukufeza ukucutshungulwa ngokuzenzakalela.
Kungani kufanele ukhethe laser yezifiso izingubo?
GOLDEN laser lolwakha laser izixazululo of ngokwezifiso ngezifiso fashion kanye izingubo umkhakha.
Kuqhathaniswa ahlabayo ithuluzi, ukuzilimaza laser has izinzuzo ngokunemba high, okudlekayo kancane, ehlanzekile imiphetho cut, futhi othomathikhi imiphetho uphawu.
lokushutheka okuzenzakalelayo, yokudla okuzenzakalelayo futhi okuqhubekayo laser cutting, iyahambisana ekukhiqizweni futhi izibonelo zalokho, ukulondoloza imisebenzi inhlukano esakaza futhi iphethini ukwenziwa.
Sebenzisa isofthiwe professional yokwakha isidleke ukwandisa ukusetshenziswa impahla okungenani 7%. I-zero ibanga phakathi amaphethini kungaba co onqenqemeni cut.
Professional software iphakethe, kulula sifinyelele iphethini okuklama, umaka ukwenza, isithombe digitizer kanye lokulinganisa. idatha Iphethini kulula ukuphatha PC.
Izimbobo (perforating), emapheshana, hollowing, umbhalo, engeli obtuse ukusika, ultra-eside format ukucutshungulwa, imishini laser Ungasingatha nganoma imiphi imininingwane kahle.
Sizimisele ukukusiza uhlakulele futhi ubuyekeze ukukhiqiza kwakho lula futhi kangcono nge laser izinhlelo zethu ezihlukahlukene.
Zethu CO 2lasers mahle ukusika futhi eqopha anhlobonhlobo izindwangu kanye nendwangu.
Nge GOLDEN laser sika CO 2laser imishini imfashini kanye izingubo umkhakha, owodwa Ply izindwangu kungenziwa laser usike ephumelelayo fast and, kanye libhalwe futhi perforated esasile Roll ukuthi unikezele. Ngakho-ke wena othe xaxa ufeze laser kunokuba ngommese.
Wasebenzise kahle amathuba ezingxoxo CO GOLDEN laser sika 2 imishini laser, ukuze ube umholi e emakethe wakho.
CO 2flatbed laser cutting mshini elihambayo
Galvo laser roll ukuthi unikezele yokwehlisa kanye umbhalo umshini
CO 2 laser umsiki ngoba plaids futhi emapheshana Indwangu
Vision laser umsiki ngoba Indwangu ephrintiwe
Laser die ahlabayo umshini sticker lembhali
Hlobo luni Indwangu kufanelekile CO2 laser ukucubungulwa?
Polyester, Aramid, Kevlar, Fleece, Ukotini, polypropylene, Polyurethane, i-fiberglass, Spacer izindwangu, Ngilubone, Usilika, Hlunga uboya, izindwangu lobuchwepheshe, zokwenziwa izindwangu, Foam, Fleece, Velcro impahla, izindwangu wathungela, anezikhala izindwangu, Plush, polyamide, njll .
Sincoma imishini laser elandelayo
imfashini kanye izingubo umkhakha
imishini CO2 laser GOLDEN laser sika mahle ukusika kanye nendwangu ngobuciko nakalula lokuqopha ekukhiqizeni.
Galvo Laser Cutting futhi Perforating Machine